[Mkpa] Ọkwa na arịrịọ maka ndị ọbịa (nke metụtara Coronavirus Infectious Diseases) | Ota Ward Cultural Promotion Association
[Mkpa] Ọkwa na arịrịọ niile ọbịa (metụtara ọhụrụ coronavirus ọrịa)
202003 / 01(Ụbọchị)
Site na mkpakọrịta
MkpakọrịtaPlaza nke obodoAplicoOhia ohia
Na akụrụngwa ndị Ota Ward Cultural Promotion Association (Ota Ward Plaza, Ota Ward Hall Aplico, Ota Bunkanomori) jikwaa ma rụọ ọrụ, ndị Mịnịstrị na-ahụ maka ahụike, Ọrụ na Ọdịmma yana Ota Ward na-agbasa ozi gbasara ọrịa coronavirus ọhụrụ ahụ. ozi kachasị ọhụrụ, anyị na-elezi anya na mgbochi ọrịa na-agbasa mgbochi, ma were usoro ndị a.
Anyị na-arịọ ka nghọta gị na imekọ ihe ọnụ iji kpuchido ahụike nke ndị ọbịa niile ma gbochie mgbasa nke ọrịa.
Mgbalị mgbochi ọrịa na-efe efe
A na-etinye mmanya na-egbu mmanya n'akụkụ dị iche iche nke ụlọ ahụ, a na-etinyekwa ncha mmiri n'ime ụlọ ịsa ahụ ọ bụla.Biko jiri ihe kwesiri.
N'ime ụlọ ahụ, anyị na-ebu disinfection patrol ọtụtụ ugboro kwa ụbọchị site na iji diluents.
Maka ndị ọrụ na-akpọtụrụ ndị ahịa, anyị ga-eyi ihe nkpuchi iji duzie ma zaghachi.
A na-etinye akwụkwọ mmado maka ịsa aka na ụkwara banyere ụlọ nzukọ.
Arịrịọ ndị ọbịa
Ọ bụrụ na ị nwere ụdị oyi na-atụ gị, biko zere ileta ụlọ ebe a na-edebe ihe nka.
Biko soro na-ekpuchi nkpuchi dịka o kwere mee na ụlọ nzukọ ahụ.
Ọ bụrụ na ụkwara ma ọ bụ zee, biko soro "ụkwara olu" nke na-ekpuchichi ọnụ gị na nkpuchi, aka aka, akwa, n'ime jaketị gị na aka uwe gị.
Dozie usoro ịsa aka
Banyere ụkpụrụ ụkwara
Banyere ijide arụmọrụ, wdg.
A kagbuola ụfọdụ mmemme ndị hostedtù ahụ kwadoro ma ọ bụ yigharịrị.Dabere na nzaghachi na ntuziaka nke mba na Ota Ward, arụmọrụ ndị enwere ike ịkagbu ma ọ bụ yigharịa nwere ike ime n'ọdịnihu.Anyị ga-eme ka ị dị ọhụrụ na ọkwa kachasị ọhụrụ na webụsaịtị anyị na akaụntụ Twitter nke gọọmentị, yabụ biko lelee ma ọ bụrụ na ị na-ezube ịbịa leta anyị.
Ihe ngosi na nzukọ a na-enwe na ụlọ ọrụ ọ bụla gosipụtara ka enwere ike na ibe ụlọ mkpakọrịta "XNUMX Owuwu Omume Omume Ihe Owuwu", mana biko jụọ onye nhazi ọ bụla maka ozi ọhụụ.
laghachi na ndepụta ahụ